Nepal - प्रहरी–अपराधी नजिक नजिक
प्रहरी–अपराधी नजिक नजिक
नेपाल प्रहरीसँग धेरै नेपाली असन्तुष्ट छन् । अरुको के कुरा, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत सन्तुष्ट नभएको कुरा सार्वजनिक भइसक्यो । त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओली नेपाल प्रहरीसँग किन असन्तुष्ट हुनुभएको हो त्यो थाहा भइसकेको छैन ।
किनभने, नेपाल प्रहरीले उहाँका लागि नगरेको त केही पनि छैन । प्रधानमन्त्री सवारी हुने ठाउँमा पूरा बाटो ब्लक गरेर सवारीलाई सुगम बनाएकै छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्नेहरुलाई गोली ठोकेकै छ । प्रधानमन्त्रीको कार्टुन सेयर गर्नेलाई पक्राउ गरेकै छ । के गरेको छैन ? यति सबै गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको सन्तुष्टि सम्बन्धी ग्रन्थीकै समस्या होला ।
अब जहाँसम्म नेपाली जनता सन्तुष्ट नहुनुको कारण छ, त्यो भने खुल्लै छ । देशको कुनै पनि कुनामा जब कुनै ठूलो अपराधको घटना हुन्छ, तब प्रहरीले भन्ने गर्छ, ‘हामीले अपराधीलाई पक्रन सकेका छैनौँ । तर, हामी अपराधीको धेरै नजिक पुगिसक्यौँ ।’
प्रहरी र अपराधीको सम्बन्ध यसबाट पनि थाहा हुन्छ । उनीहरु वास्तवमा नजिक नजिक नै हुने गर्छन् । अझ कहिलेकाहीँ त ‘धेरै नजिक’ पनि हुने गर्छन् । प्रहरी र अपराधी भनेको यति धेरै नजिक हुन्छन्, कहिलेकाहीँ त उनीहरु एउटै कोठाका दुइटा सोफामा सँगै बसिरहेका हुन्छन् । दूरी भनेको दुइटा सोफाबीचको एउटा टि टेबुलजति मात्रै हुन्छ । यति छोटो दूरीलाई के दूरी भन्नु ! वास्तवमा प्रहरीले अपराधीलाई पक्रन नसक्नुको कारण उनीहरु ‘धेरै नजिक’ हुने भएकाले पनि हो । आफूसँग नजिक भएको मान्छेलाई कसरी पक्रनु ?